Proclaiming the Word - MIILA GOOFTAA YESUS JALA | Outlines of Messages
MIILA GOOFTAA YESUS JALA
1. Dhiifamuu Cubbuu (Luk 7,38)
Namichi fariisichii sun gooftaa Yesus mana isaatin yoo afeerayyuu miila gooftaa jala hin teenye. Innis isaa waliin minjaalarra ta'uu barbaade. Dubartiittiin gooftaa yesus mana isheettii hin afeere, sababni ishees tarii mana waan hin qabneefi ta'a. Garuu, rakkina ishee isaa guddaa barteetti innis cubbuudha. Dhiifamni cubbuu akka ishee barbaachisuus barteetti cubbuu ishees qabatee miilla qooftaa jalatti gad of deebiftee dhiyaateetti.
Gooftaan Yesus waaqa cubbuu namaaf dhiisuudha.
2. Barsiisa Sirrii (Luk 10,39)
Biyyaa bitaaniyaa jedhamtu keessa obbolaan dubraa Martaa fii Maariyaam jedhamantu waliin jiraata ture. Guyyaa tokkoos Martaan gooftaa yesus gara mana isaaniitti afeerte. Martaa gooftaa gara mana isaanii afeertullee miilla isa jala teesse isarraa baruu hin dandeenye. Mariiyaam garuu miilla gooftaa yesus jala teesse dubbii gooftarra barachaa ture. Maariyaam garuu, iddoo obbolleetti ishee butee qalbiidhaan gooftaa duukaa buute dubbii isaa irraa baraa turte. Miilla gooftaa jala teessee isa irra barachuun ishee kunis "Maariyaan qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne fo'atte" ishee jedhamsisee.
Gooftaan Yesus waaqa dhugaatti, waaqa nuu beekuufii nu jaalattuudha.
3. Jajjabeessuu (Yoh 11,32)
Alaazaar obbolleessi Maariyaam waan du'eef, Maariyaam fii namootni warra yihuudota gadda ta'an. Yero Maariyaam yihudoota bira gad fiigdu iddo awwaalatti dhaqxe boosi jedhani yaada turan. Haa ta'u malee, yaada ishee kan qabe iddoo awwaala dhaqanii boo'u hin ture. Namarraas jajjabeessaa guutuu ta'ee akka hin arganne hubateerti. Kanaaf yeroo gooftaa argiteeti miilla isaatii kufuu kan filate. Gooftaa yesus duwwaatu guutummaatti nama jajjabeessuu danda'a. Maariyaam kana waan amanteef gooftaan gaddaa fii gadadoo ishee irraa mulqee laphee ishee gammachuun guutee.
Gooftaan Yesus Waaqa rakkina keenyarratti of-egannoo nuuf godhudha.
4. Jireenya Daa'ima (Luk 8,41)
Duuti intala Yaayiros, Yaayiros gooftaa akka barbaadatuuf sababa ta'eefi. Innis gooftaa argate miilla isaatti kufe. Innis intala isaatiifis namni kamiyyuu jireenya lachuu akka hin dandeenyes ni hubate. Yaayinsiis dhugaa dubbii waaqayyoo "daa'immaan gooftaan ala duutuudha" jedhu ni mirkaneeffate. Matummaayyuu, jaalala warra irra, qilleensa harganan irra, gola keessa jiraatan irra, uffataa fii nyaata irraa muccollii fi gooftaatu barbaachisa. Yaayirosiis rakkina du'a intala isaa waliin eessaa akka deemu sirriitti hubatee beeke.
Gooftaan yesus waaqa ijjoollee hundaaf jireenya kennuu fedhuudha.
5. Galata (Luk 17,16)
Namootni dhukkuba lamxii qaban kudhan gooftaa yesus qunnamanii (arganii) jaalala waaqayyoos ofiitti fudhatanii walbaran. Hundumtii isaanis dhukkubichaarra niqullaa'an, gara jireenya isaanii isa fayyaattis ni deebi'an. Isaan keessaayis inni tokko eenyuuf hooqubaan akka ta'uu bare deebi'ee miilla gooftaa yesus jalatti kufe. Innis nama biyyaa samaariyaa ture. Kan baay'ee nama dhibuu garuu, deebi'uu isaa sana osoo hin ta'in, warroota saglan deebi'uu didaniidha. Namtichi biyyaa samaariyaa sunis al lama qulla'ee, innis qaama isaa isa irraa keessa fii qaama isaa isa keessaa (hafuuratti) qullaa'e.
Hooqubaa dhiyeessuun isaa nama hafuura ta'uu isaa ibsa.
Gooftaan yesus waaqa hooqubaa (galata) keenya barbaaduu dha.
6. Sodaa irratti Mo'icha argachuu (Mul. 1,17)
Yennaa Yohaannis ergamaan gooftaa Yesus, ulfina isaa waliin argu, sodaa guddaatu isa qabate. Innis nama gooftaa beekuu, isaa waliin deemee, barsiisa isa dhaga'ee, qaama isaattin isaa tuqe ture. Garuu, yenna gooftaa yesus ulfina isaa waliin arge umuriin isaa osoo isaa hin qabne miilla isaatti lafa dhahe. Innis gooftaan yesus isaa jalqabaa fii isaa dhuma ta'uu isaas bareechee hubateera. Innis ofii isaatti callisee gooftaan akka dubbatu heeyyaameefi. Yohaannis ergamichis fakkeenya guddaa ta'ee nama gooftaaf jiraatedha. Innis iddoon gaariin adunyaa kana keessaa miilla gooftaa jala ta'uu hubate.
Gooftaan yesus waaqa jireenyaa fii ulfina keenyaa barbaaduu dha.